Maalmahan, isticmaalka telefoonada gacanta sii kordhaya maalinba maalinta ka. Arrintan oo uu weheliyo caanka ah ee telefoonka mobile; isticmaalka ringtones sidoo kale sii kordhaya kuwaas oo inta badan laga codsadaa in ay aqoonsadaan soo wacaya ee maqlidda ringtones iyo in la sameeyo isticmaalka telefoonka gacanta iyada oo xiiso leh. Ka hor inta ringtones ayaa hore lagu rakibay by shirkadaha soo saarka mobile, laakiin maalmahan kala duwan software ayaa waxaa loo isticmaalaa in la abuuro ringtones cusub iyo kartoo. Sidaas darteed, jaraya ringtone leeyihiin door muhiim ah in la abuuro ringtones. Iyadoo isticmaalka magaabay ringtone ah, Gurtida kala duwan iyo files audio la jari karin oo isku wada dheggan yihiin. Waxaa jira desktop software kala duwan ee la heli karo abuurista iyo jarida ringtones, oo ay ku jiraan, jaraya ringtone online iyo Android iyo macruufka barnaamijyadooda magaabay ringtone.
Qeybta 1: jaraya Top Desktop Ringtone
Qeybta 2: jaraya Top Online Ringtone
Qeybta 3: jaraya Top Android Ringtone
Qeybta 4: Ringtone Apps magaabay ee macruufka
Kan sameeyey 1. AVCWare Ringtone
Waa software ringtone abuurista ah ee ay soo ACWare Studio. Software Tani si weyn loo isticmaalo abuuro ringtones ee telefoonada gacanta iyo qalabka kale. Waxay ka caawisaa in la abuuro ringtones kartoo kuwaas oo qaabab kala duwan. Waxay kaa caawinaysaa in aad ku darto baxeysa dhaqan iyo libdhi baxay saamayn ku ringtone ah. Isticmaalka software this files mp3 iyo ringtones waa laga gooyn karo hoos u yar mp3 files.
Interface Simple user
Taageerada ku dhowaad dhammaan qaababka
Waqti fariisiyo yara
Kan sameeyey 2. Free Ringtone
Ringtone Kan sameeyey Free waa software fiican ee la abuurayo ringtones, yareyn ringtones ee qaybo yaryar oo ku daray in ay saamayn ringtones ah. The files audio waa laga gooyn karaa hoos qaybo yaryar oo isticmaalaya function goo oo laga heli karo gudahood software ah. Markii bilowgii iyo dhammaadka wakhtiga ah qayb ka mid ah taas oo aan u baahan yihiin in la soo xulay oo codsanaya fursad u goo u soo degin inuu soo ringtone loo baahan yahay ka gooyn doonaa. Waa software freeware sida hawlaha la heli karo ay yar yihiin.
Waa freeware ah. Interface Simple user
Saamaynta kala duwan ayaa la isticmaali karo
Hawlaha la heli karo waa xadidan.
AV Ringtone Max horumarsan by AVSoft oo ka caawisaa in la abuuro ringtones gaar ah mobile. Software Tani waxaa sidoo kale loo isticmaalaa falinjeeerka qaybo audio ah. Software waxa uu leeyahay muuqaal Macdan audio ka video iyo ka dib wax ka bedel kara saamaynta kala duwan. Xataa waxaan codkayagii ku qori karta oo ku daraan la saamaynta kala duwan. Waxaan ringtone finalka si toos ah u qalab kasta oo la isticmaalayo mobile kala iibsiga Bluetooth soo diri kartaa.
Waxa ay u ogolaataa user ay u soo saaro audio ka video ah.
Tayada Output waa heer sare ah
Wax gaar ah.
Software desktop Tani ma aha sida weyn sida software ah ee hore loogu abuuro ringtones halka u tayo leh loogu isticmaali karaa jarida ringtones. Software Tani ma leedahay awood ay ku soo saaro audio ka files video iyo si ay xaddidan yihiin in muuqaalada. Iyagu ma bixiya badan si ay macaamiisha ugu. Files ayaa mp3 of size weyn inaan la rarin karaa app this. Inta badan, app this laga fariisiyo. Waxaa la socon kara telefoonada badan iyo nidaamyada hawlgalka.
Waa arrin aad u sahlan in ay isticmaalaan aad u fududahay in la isticmaalo
Waxaa la shaqeeyaa noocyo kala duwan oo ah telefoonada gacanta.
Qalabka abuurka oo aan ahayn mid aad u dhabta ah.
Kan sameeyey 5. AVGO Free Ringtone
Waa software free taas oo ka caawisaa si ay u dhinto ringtones ka kasta qaab maqal iyo muuqaalka leh. Waxay leedahay fudud ah si ay u isticmaalaan interface iyo xataa qof aan khibradda lahayn isticmaali kartaa software si fudud. Waxa ugu muhiimsan ee software tani waa in ay taageerto abuuro Dufcaddii ee ka baxeysa ee saamaynta iyo libdhi baxay saamaynta. Waxaa noo ogolaaneysa in ay doortaan qayb ka clip ah oo jar ka file ugu weyn oo u badbaadin doonaa sida faylasha ringtone oo kala duwan. Qaabab warbaahinta xusay sida Mp3, Amr, MP4, mp3 waxaa taageera software this.
Wuxuu ka caawiyaa in la abuuro Dufcaddii ee saamaynta.
Libdhi ee waxay u engegi doonaan baxay saamayn lagu dabaqi karo.
Mararka qaarkood barnaamijka bidbidayaan.
6. Boilsoft ringtone gaare
Software Tani waxaa si balaadhan looga isticmaalaa abuurista ringtones iyo fulinta hawlaha ringtones la xiriira. Waxay leedahay awoodaha kala duwan ee kala duwan. Waxa uu feature gaar ah ie jaray qaybaha kala duwan ee ka soo video ah oo maqal ah oo isku daraa si ay u sameeyaan ringtone ah. Customization heerka muunad, heerka yara iyo channels abuurista ringtones waa muujinta gaarka ah ee software this. Waannu qori kartaa cod u gaar ah waxa ay sii kordhineysaa oo ay weheliyaan codad kale oo kala duwan si ay u abuuraan ringtone gaar ah. Files ayaa si fudud loo jari karaa hoos u galaan qeybaha yaryar.
Waxa ay u ogolaataa Customization ee heerka muunad, heerka qaniinyada.
Cabbirka file wax soo saarka jiri doontaa meel sare.
Factory 7. Qaabka
Software Tani ma ahan oo kaliya abuurista iyo jarida ringtones laakiin waxaa inta badan loo isticmaalaa diinta of audio iyo video files. Software waxa uu leeyahay xaddi badan oo ah qaababka iyo tan tayo leh loogu isticmaali karaa yareyn ringtones ah. Waxa aynu u baahan yahay in la furo ilaa ringtone ku warshad qaab iyo in tab sare ka dib; Qayb bilowga iyo dhamaadka qayb u baahan tahay in loo xusho jaro. Ka dib markii xulashada waxaan dooran kartaa bilowga oo bilaaban doona nidaamka. Waxaan xitaa jari kartaa ringtone iyo videos.
Ku dhawaad ​​nooc kasta oo ah qaabab audio waxaa taageera.
Waa mid aad u fudud in ay sameeyaan diinta warbaahinta.
8. Easy magaabay Audio
Easy magaabay Audio waa aalad fudud in la gooyaa qayb gaar ah oo ka file maqal ah sida ay noo looga baahan yahay. Tani waa qalab lacag la'aan ah iyo waxa aanu u taageertaa files audio ka mid ah bitrates sare. In ka badan in video files ma taageersana by software this. Waxa loo isticmaalaa nuur isticmaalo ujeedooyin sida sampling, jarida files mp3 iyo saamaynta heerka yara.
Files Mp3 si fudud loo soo biiray karo.
Files Video ma taageersana
Pro Exmplayer waa abaalmarinta ku guuleystay software Warbaahinta oo la ciyaaryahan music ah iyo sida magaabay mp3 ah oo inta badan loo isticmaalo. Laakiin software tani waxaa karti leh feature ah si ay u dhinto mp3 magaabay files.Mp3 lagu daray oo ay la socdaan qaababka kale ee software. Sidaas darteed, markii hees ama video waxaa ciyaaray, waxaana karo hoos u dhibic ku bilaabatay iyagoo dhegeysanaya fayl iyo si la mid ah waxaan qasacadaha fadhiistay dhibic dhamaadka iyo iyadoo la isticmaalayo qalab mp3 magaabay oo laga heli karo waa in aan jari karaa qaybo ka dhexeeya dhibic bilowga iyo dhamaadka dhibic. Waxa aanu bixiyaa qaababka dheeraad ah halka files mp3 waa laga gooyn karaa hoos. Haddii video files Waxaana ka soo Siibnaa karaa audio ka file video ah oo isticmaalaya shawladda audio iyo waxaan isticmaali kartaa kuwa files audio ee hawlaha dheeraad ah. Ciyaaryahanka Tani waxay taageertaa 3D video loo maqli karo. Convertor Audio taageeraa in ka badan 5 qaabab.
Waxaa inta badan loo isticmaalaa sida ciyaaryahan warbaahinta ah.
Magaabay Ringtone waa fududahay in la isticmaalo.
Waxay qaadan doontaa tiro aad u badan oo ah meel xasuusta
10. AWOODDA AUDIO magaabay
Waa barnaamij software fudud oo waxaa loo isticmaalaa in la gooyaa kuwan raadkaygay audio galay qeybaha yaryar. Waxay ma bixiyaan qaababka badan. Waa barnaamij freeware waana lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan. Kaliya hal version of barnaamijka waa la heli karo iyo waxa uusan haysan version a pro. Interface barnaamijka waa mid fudud badan oo uusan haysan wax qalab adag. Hoos Ringtones waa laga gooyn karo doorataa hal dhibic bilowga iyo dhamaadka dhibic iyo doorto bilaabatay qaab beddelidda.
Ringtone si fudud loo jari karaa.
Interface waa mid fudud badan.
Hawlaha aasaasiga ah oo keliya ayaa la samayn karaa.
Audiko.net waa aalad online for jarida iyo in la abuuro ringtones. Tani waa bogga internetka ee hogaanka ugu badan ee la abuurayo ringtones iyo jarida files galay qeybaha yaryar. Website-kani waxaa si gaar ah loogu talagalay ringtones iyo codsiyada la xiriira. Si loo jari ringtones, marka hore waxaan u baahannahay in geliyaan file maqal ah in la segmented. Faylal ay la uploaded kartaa laba hab. Habka First waa ay audio uploading ka drive noo adag iyo habka labaad u ogolaanaya galaya URL ee file ah oo loo baahan yahay. Tallaabada labaad waa sigu .Kadib koombiyuutarka ee file, waxaan isticmaali kartaa sigu ie Waxaan dooran kartaa qayb ka mid ah faylka maqal ah oo ay tahay in la si ay u sameeyaan ringtone la gooyaa oo. Waxaan kara inuu wax badbaadiyo doonaa qaybtii segmented in ay naga pc. Boggan waxa uu bixiyaa tiro badan oo ah ringtone downloads.
Waxaa loogu talagalay codsiyada ringtone la xiriira.
Faylal ay si fudud uploaded karo
Waxay bixisaa tiro badan oo ringtone download
Bogga internetka qaadato xoogaa waqti ah in shuban
Boggan waxa uu leeyahay qaar ka mid ah muuqaalada badan oo horumarsan marka la barbar dhigo websites kale sameynta ringtone online. Waa website-ka aalad online diinta ka xor ah. Feature ugu weyn ee ay bixiyaan software tani waa diinta audio. Waxa uu ka dhisay Converter audio oo loo isticmaali karaa diinta files audio in qaab kasta oo ay weheliyaan gaare ringtone. Hoos qaybo gaar ah oo isticmaalaya qalab online annana karaa file ah oo maqal ah iyo ka dib waxaa loo isticmaali karaa in la abuuro ringtones. Boggan waxa uu bixiyaa qaababka ay u abuuraan ringtone iyadoo la isticmaalayo saamaynta sare. Waxaan u baahanahay inaan file geliyaan ka computer-ka, waxaana ay qiyaar u leeyihiin inay jari qaybaha gaarka ah ka file maqal ah. Waxaan u leeyihiin in ay galaan id Email si file kama dambaysta ah waxaa loo diri doonaa cinwaanka email noo.
Waa aalad diinta free
File Audio loo rogi karaa in nooc kasta oo ah qaabab
Wax gaar ah
Waa aalad sare online oo waxaa loo isticmaalaa in la abuuro ringtones. Boggan waxa uu leeyahay mid ah sifooyinka wanaagsan oo xiiso leh oo ka dhici doona abuurista ringtones si heer cusub. Waa dhif in la arko websites sidan oo kale kuwaas oo bixiya qaababka badan oo horumarsan abuuro ringtones. Waxay bixisaa 3 qaabab loo sameeyo ringtones. Inta lagu guda jiro habka abuurista ringtones, waxaan jari karo files si ay qaybaha oo ku salaysan rabitaan. Ayaa qaabab kala duwan oo la heli karo waa hab fudud, hab sare iyo hab khabiir. Oo dhan saddex hababka loo isticmaali karaa in lagu yareeyo ringtones inay qaybaha yar oo dheeraad ah.
Ringtone si fudud loo abuuri karo.
Hababka kala duwan la heli karaa
Khibrad waa loo baahan yahay in looga shaqeeyo
Qalab website waxa uu leeyahay waxyaalo badan oo la mid ah sida in makemyringtone.org website-ka. Boggan waxa uu bixiyaa saddex hababka loogu abuuro ringtones. In hab fudud, kaliya muuqaalada aasaasiga ah waxaa laga heli karaa sida xulashada ah bilowga iyo dhamaadka hal dhibic si ay u jari ka ringtone iyo qadar yar oo ah saamaynta waxaa laga heli karaa in aad ku darto si ringtone ah. Tani waa hab ku filan jarida ringtones. Hab labaad waa hab sare oo uu raad dheeraad ah oo ay la socoto doorasho goynta ringtone. Doorasho ku baxayn ee waxay u engegi doonaan baxay ee la heli karo isaga oo intaa raaciyay in faylasha. Waa aalad online awood badan la abuuro ringtone ah.
Waa aalad awood leh
Muuqaalada dheeraad ah oo aan la heli karin.
Website A online abuurka ringtone kuwaas oo aan lahayn qaababka badan. Waxaa goobta fudud user interface oo aan sifooyinka badan ayaa laga heli karaa. Tani aalad online waxaa asal ahaan loo isticmaalo abuuro ringtones ay diinta ka mid ah qaab of audio ka mid kale halka socodka ah ee diinta waxaan jari karo files soo galeen qeybaha yaryar. Doorashada bilowga dhibic dhibic iyo dhamaadka waxaa la heli karaa oo ay la socdaan waxaa la iyo waxa loo isticmaali karaa si ay u dhinto files soo galeen ringtones yar. Iyagu ma bixiyaan nooc kasta oo saameyn in la isku daro ay u ringtone ah. Faylka si loo jari waxaa looga baahan yahay in ay geliyaan si ay website-ka iyadoo la isticmaalayo Upload file doorasho oo laga heli karo website-ka.
Doorashada bilowga dhibic dhibic iyo dhamaadka waa u fududahay
Iyagu ma bixiyaan nooc kasta oo saameyn in la isku daro ay u ringtone ah
Cutmp3.net waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo ugu files audio ka mid ah qaabab kala duwan si ay qaybo yar yar. Bogga internet ku waa si fudud in aad ku darto in uu leeyahay qaar ka mid ah oo kaliya hawlaha aasaasiga ah si ay u sameeyaan iyo wax ka badan in. By isticmaalaya this site, geeddi-socodka lagu soo jareen oo qayb ka mid ah loo baahan yahay ee file maqal ah waa si fudud. Waxay ka kooban tahay saddex tallaabo. In tallaabada ugu horreysa, waxaan u baahan nahay in ay doortaan ringtone, kaas oo aan u baahanahay in la jari. Tallaabada labaad waxaan u baahan nahay in ay doortaan qayb ka mid ah in ringtone ah oo loo baahan yahay si loo jari. Tallaabada saddexaad waxaa ka mid ah naftu qayb cut in drive wax ama meel kale mobile ah. In erayada gaaban, website-kan waxa lagu macneen karaa aalad online loo isticmaalaa in lagu jari ringtones in qaybo yar-yar.
Users New u isticmaali kartaa.
Waxay leedahay qaar ka mid ah oo kaliya hawlaha aasaasiga ah si ay u sameeyaan iyo wax ka badan in.
Mid ka mid ah online qaadashada ringtone qalab horumarsan oo waxay leedahay waxyaalo dheeraad ah oo marka la barbar dhigo websites kale. Boggan waxa uu bixiyaa ringtones free download aad. Tutorial A online waxaa laga heli karaa website-ka kuwaas oo kaa caawin in la abuuro ringtones iyadoo la isticmaalayo internetka. Waa beesha bulshada ringtone mobile ah oo ka caawisaa in la abuuro ringtone. Hoos ringtones ayaa la jari karaa in yar; qaybaha ay habkaani. Waa hodan ku saamaynta. Tiro badan oo ka mid ah muuqaalada laga heli karaa website-ka. In ka badan 100 saamaynta ayaa diyaar u ah abuurista ringtones. Waxaan u baahanahay in guji jeegga in doorasho si ay u doortaan hal dhibic bilowga iyo hubi in doorasho la doorto ikhtiyaarka ugu dambaysta.
Waxay bixisaa ringtone downloads.
Waa hodan ku yahay saamaynta
File saarka wuxuu noqon doonaa ee size waaweyn.
By isticmaalaya website-kan online waxaan jari karaa wax files audio galay ringtones. By codsanaya talaabooyin fudud waxaan jari karaa ringtones ah. Boggan waxa uu sidoo kale leeyahay database weyn u ringtones lacag la'aan ah. Codsiga taas oo lagu daray website-ka taageertaa dhammaan nooca files audio iyo haddii aan furo file a ka dibna file maqal ah la jari karaa meelo yar yar iyadoo la isticmaalayo codsiga lagu rakibay bogga internetka ee. Dhanka kale, arrinta file video ah, marka aan geliyaan file video ah, ka dibna file maqal ah lagu soo saaro karaa bogga internetka ka oo laga dambe jari by habka kor ku xusan.
Goobta uu leeyahay database weyn u ringtones lacag la'aan ah.
Codsiga taas oo lagu daray website-ka taageertaa ku dhowaad nooc kasta oo files audio
Waa geedi socod adag.
Ads daboolayaa qayb inta badan website-ka.
Website-kani waxaa loogu talagalay oo kaliya jarida files audio .Waxa waa website aad u fudud qalab casri ah oo weli waxay leedahay saddex tallaabo oo ah geedi socodka. Talaabooyinka ugu horeeya ku jira koombiyuutarka oo ka mid ah files audio in website-ka by doorashada doorasho audio. Habka labaad waa habka dhimo. Ka dib markii uploading file maqal ah, waxa na weydiisan doontaa inaad doorato hal dhibic si ay u bilaabaan iyo barta si loo soo afjaro. Ka dib markii xulashada iyo dooranayaan jaro sida qayb ka mid ah loo doortay hoos waa laga gooyn doonaa si file cusub iyo habka saddexaad waxaa ka mid ah keydinta file la jarjaray. Waxaan leenahay si loo badbaadiyo jaro hoos faylka si aannu drive.
Audio la soo saaro kartaa file video.
Baahan yahay qaar ka mid ah aqoonta ay u shaqeeyaan waxa ay ku
Waa qalab waxtar online in jari files oo waxaad ka samaysaa ringtones noo gaar ah iyadoo la kaashanayo saamaynta kala duwan. Iyada oo la isticmaalo oo ka mid ah qalabka online, waxaa looga fogaan karaa software desktop ee kuwan oo qalab online bixiyaan qaababka taas oo ku dhow yihiin la mid ah sida software desktop-ka. Software desktop waa mid aad u adag marka la barbar dhigo tan qalab online. Habka in qalab online waa isku mid sida in qalabka kale ee aan u baahanahay in geliyaan file maqal ah ama ringtone waxaa loo jari ka dib markii uploading file ah, waxaa noo taas oo u shaqayn waxaan u leeyihiin in ay qabtaan ku weydiin doona. Hawlaha kala duwan laga heli karaa goobta yihiin magaabay mp3, joiner warbaahinta, abuuridda Ringtone. Waxaa From waxaan u leeyihiin in ay doortaan mp3 magaabay iyo ka dib markii ay na weydiisan doonaa in ay doortaan hal dhibic bilowga iyo dhamaadka dhibic. By xulashada dhibic bilowga iyo dhamaadka dhibic oo gujinaya fursad u dhimo, waxaan awoodi doonaa in la jaraa qayb ka mid ah loo baahan yahay.
Qalabka la heli karo waxaa ay ku koobnaanayaan
Badan oo xayeysiis
Tani waa mid ka mid ah codsiyada android sare kaasoo loo isticmaalo yareyn files audio iyo video files in qeybaha yaryar. Xitaa inta badan downloader video sida Tubemate iyo kuwa kale na weydiisan doonaa inaad kala soo baxdo Media app Converter si ay u badalaan oo gooysaan oo files audio. Interface ayaa user ee app waa mid aad u badan oo fudud. App wuxuu taageeraa dhamaan nooca audio iyo video qaabab ee telefoonka android. Video inay diinta ka maqal ah waxaa suurto gal ah, adigoo isticmaalaya app this. Marka xuli doona file loo baahan yahay in la gooyn, Wuu ka codsan doonaa tayada wax soo saarka iyo heerka muunad file iyo suuqa kala mid ah waxaan awood u yeelan doonaan in ay doortaan hal dhibic bilowga iyo dhamaadka ah iyo dooro ikhtiyaarka ok kaas oo bilaaban doona habka
Hoos Ringtone waa laga gooyn karaa mid aad u fudud.
Inta badan oo ka mid ah qaabab audio waxaa taageera
App wuxuu qaadanayaa xusuusta badan
Tani waa app version android ee ringtone kii caanka online Audiko. Tani waa version app ee qalabka online ah. App waxa uu leeyahay qaar ka mid ah muuqaalada badan oo horumarsan marka la barbar dhigo in qalabka online. App Tani inoo siinaysaa in la abuuro ringtones caadadii ay ku daray saamaynta kala duwan iyo qaababka. Waxaa inoo siinaysaa in laga soo gooyay oo qayb sax ah oo ku saabsan audio oo dhan kaas oo aan u baahanahay ah. App Tani inoo siineysaa in aan kala soo bixi ringtones ka database aad u weyn. Ringtones waxaa laga arki karaa sida ay qaybaha ka. App Tani waa utility weyn ee telefoonada android abuurista ringtones oo gooysaan oo files audio.
Wuxuu ka caawiyaa in la abuuro ringtones caadadii.
Miyuu database badan oo ringtone downloads.
Android 4.2 iyo sare ayaa loo baahan yahay.
App Tani waa il furan editor ringtone ee telefoonada android. App Tani ayaa lagala soo bixi by malaayiin tan iyo markii la bilaabay. Waxay awood u isticmaala si ay u abuuraan ringtones kartoo, codadka iyo Ogeysiinta digniinta. Waxay leedahay editor ringtone oo awood u isticmaala inay jari qayb gaar ah oo ka file oo dhan ah. Tani waa app fiican oo abuuraya ringtone. Waxay leedahay muuqaalada ka badan marka la barbar dhigo in ka mid ah barnaamijyadooda kale. Waxaa isticmaala u saamaxaaya in ay ku darto saamaynta gaar ah sida ka baxeysa ee -fade baxay iyo saamaynta kale. Waxaa weydiiyo fasax ah si aad u eegto xiriirada helaan, si ay u dhigay ringtone xiriirada.
Waxaa loo isticmaalaa in la abuuro codadka kartoo, digniinta.
Ringtones si fudud loo jari karaa.
Version bixisay kaliya ayaa bixiya muuqaalada buuxa
24. Ringtone magaabay
Tani waa waa in ay haystaan ​​qalab lagu telefoonka ah android. Waxaa gebi ahaanba freeapp. By isticmaalaya app this aan ku abuuri karno naga ringtones u gaar ah, qaylo, ama ogeysiis dhawaaqa adigoo isticmaalaya ah file dhawaaqa jira taleefanka mobile. Waxa kale oo ay u saamaxaaya in ay la gooyaa qayb gaar ah oo ka files audio. Waxay leedahay qalab ah oo lagu magacaabo jarida qalab oo doonistiisa awood u isticmaala in ay la gooyaa qayb gaar ah oo ka ringtone oo ku badaley qaabab kasta sida: mp3, AAC, regelingen, bartamihii.
Waa app oo lacag la'aan ah
Functions way xadidan tahay.
25. goo iyo jawiga
App Xaqiiqadii tani waa app audio la isku qasin, laakiin waa uu leeyahay muuqaalada dheeraad ah oo loo isticmaali karaa abuurista ringtone ah. Waxay ka caawisaa dadka isticmaala si ay u jar oo ku milmaan laba files audio. Ringtones si fudud loo heli karaa app this. App Tani waa asal ahaan fudud, halka marka la barbar dhigo in ay barnaamijyadooda kale ugu wacan interface user ee app this taas oo si caddaalad ah ugu fudud. File saarka ayaa la badbaadin karaa sida qaab la doonayo. Interface ayaa user taas oo fudud user u saamaxaaya in ay ka gooyay codadka la qasabno yar iyo sidoo mariya telefoonka android. Laga bilaabo iyo soo afjaridda dhibcaha ayaa lagu hagaajin karo hoos. In erayada gaaban, Waa app wanaagsan android oo awood u isticmaala in ay jari files audio.
Qodan Audio waxaa la samayn karaa.
Codadka la hoos si fudud oo wax ku ool ah jari karaa.
Gaare 26. Ringtone
Tani waa top app ee lagu qiimeeyo ee dukaanka app macruufka kaasi oo loo adeegsaday ay malaayiin qof oo lagu abuurayo ringtones kartoo, ogaysiisyada, digniinta, goynta ringtones. Waxay awood u isticmaala si ay u abuuraan ringtones ka songs ipad. In la sameeyo ringtones kuma koobna. App waxay leedahay muuqaal jari oo awood u isticmaala in ay la gooyaa qayb gaar ah o ringtones ama faylasha kale audio .Waa in ay doortaan bilowga iyo dhamaadka qaybtii si ay u jari. Libdhi ku baxeysa ka soo baxay feature lagu dabakhi karaa iyadoo la isticmaalayo app this. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala si ay u qoraan wax heeso iyo wax ka bedel iyo jar in ringtone ah kartoo
Ringtone si fudud loo beddeli karaa
Libdhi ee waxay u engegi doonaan baxay saamayn si fudud loo isticmaali karo
Os macruufka 4 iyo sare waxaa looga baahan yahay
27. Ringtone naqshadeeye music
Waa app kale laga heli karaa dukaanka macruufka app oo awood u doono user in la abuuro ringtones aan xad lahayn caado, digniinta, iyo codadka qoraalka iyadoo la isticmaalayo songs jira maktabadda music ah. App Tani ayaa sidoo kale awood u user ay u jari qayb gaar ah oo ka total file maqal ah. Waxa uu leeyahay interface user qurux badan si ay u qabsadaan dhererka ringtone ah. Waa arrin aad u degdeg ah oo ku haboon habka jarida ringtones.
Waa ay fududahay in la isticmaalo
Sahlo falinjeeerka feature
Ma aha app oo lacag la'aan ah.
28. Abuur Ringtones
Inta badan Chine ee dukaanka macruufka ah ma aha lacag la'aan ah, laakiin app this gebi ahaanba waa mid lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan. Waxaa loo qorsheeyay in sidan oo kale in xitaa user aan khibradda lahayn ku shaqayn karaa a. App Tani waa inta badan loo isticmaalaa abuurista ringtones iyo tafatirka ee ringtones. Habka tafatirka ee ringtones ka mid ah jaritaanka ee ringtones. Waxaa loola jeedaa in qaar ka mid ah files jari kartaa hoos si ay u sameeyaan ringtone kale. Feature goo in app ee loo isticmaali karaa goynta hoos ka mid ah files audio. Waxaannu karaa bilowga iyo dhammaadka ringtone ah. Waxaa gebi ahaanba waa hab xor ah oo weyn si ay u abuuraan ringtone.
Xitaa user aan khibradda lahayn ku shaqayn karaa.
Waxaa loo isticmaalaa in la abuuro ringtones iyo tafatirka ee ringtones.
Mararka qaarkood waxaa shil hoos.
29. Ringtone Kan sameeyey App
Waa app ka sii horumarsan loo isticmaalo abuuro ringtones. App waxa uu leeyahay muuqaalada ka badan marka la barbar dhigo in ay barnaamijyadooda kale dukaanka macruufka ah. Waxay leedahay muujinta ku darto song rikoor ah oo ka dhigi ringtones caadadii. Goynta ee ringtone sidoo kale waxaa laga heli karaa app this. Waxay ka caawisaa si ay u abuuraan qodobada bilowga iyo dhamaadka ka files audio dherer ah ugu badnaan 40 il-biriqsi. Doorashada markii si sax ah kala duwan 0.02 ilbiriqsi. Files Audio la iska jaro karo; qaybtoodii loo baahan yahay gabayga ah maktabadda music qalab macruufka ah ee la badbaadin karaa.
Goynta ee ringtone sidoo kale waxaa laga heli karaa app this.
30. Custom Ringtone Kan sameeyey Max
App Tani ayaa kaalinta 1 sida app music sare ee App Store ee 5 dal. App waxa uu leeyahay user interface fudud oo aan u baahnayn khibrad si ay u isticmaalaan app this. Qof kasta isticmaali kartaa app this si ay u abuuraan ringtones. Ringtones beddeli karaa si fudud lagu dabaqo iyo abuuray. App kuweeda hees si Ringtone ee tuubada kaliya. Waxa aanu lahayn astaamaha ugu badan waa app qaadashada ringtone aasaasiga ah. Qaar ka mid ah meelaha hoos u gaar ah waa laga gooyn karaa file maqal ah oo isticmaalaya qalab la dhimo in app. Waxaan abuuri kartaa ringtone cusub iyo kartoo isticmaalaya app this.
Waa arrin aad u sahlan in ay isticmaalaan
Masiixiga waa samaysay ay tuubada fudud
Ma aha version ah oo lacag la'aan ah.
Top 15 Shabakadaha in Download Free Country Ringtones
12 Qalabka lagu talinayo u fiican iyo Easy Vlogging
Sidee Baan U beddelaan M4P in MP3
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photo & Video ka Nokia Lumia
Home Video ayeey Talooyin - Sida loo sameeyo a Great Home Movie
Sida loo Guba eMule Movies in DVD
> Resource > Video > Top 30 jaraya Ringtone u Platform kasta